Laptop battery — MYSTERY ZILLION
ခုချိန်မှာ လက်တော့ပ် သုံးစွဲကြတဲ့သူလည်း များလာပြီ။ ထိန်းသိမ်းနည်းလေးတွေပြောကြရင်ကောင်းမလား။ သိချင်တာကတော့ ဘက်ထရီကို ကြာကြာခံအောင်၊ သုံးနိုင်အောင် သုံးနည်းလေးပေါ့။ သိပြီးသားလူတွေများမှာပါ။ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ကတော့ မသိသေးလို့ ပြောပြကြပါဦး။ သူများတွေပြောကြတာတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါ လုံး၀ ဘက်ထရီကျသွားတဲ့အထိကို သုံးပစ်တဲ့။ တချို့ကလည်း ၂၀%လောက်ကျန်အောင်ပဲ သုံးတဲ့။ အကုန်မသုံးသင့်ဘူးတဲ့။ တချို့ကလည်း အမြဲတမ်း အားသွင်းထားပြီး သုံးတယ်။ တချို့ကလည်း အားပြည့်နေရင် ဖြုတ်သုံးတယ်။ ကုန်ခါနီးမှ ပြန်တပ်တယ်။ ဘယ်လိုသုံးတာက အကောင်းဆုံးလဲ။ ပြောပြကြပါဦး။
ကျွန်တော်ကတော့ အမြဲတမ်း ပလပ်တပ်ထားပြီးသုံးပါတယ်ခင်ဗျာ.
ပြီးတော့ Laptop မှာ Power သုံးစွဲမှုကို ကန့်သတ်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ......
HP မှာဆို (ကျနော်က HP သုံးလို့ပါ)
3.High Performance ဆိုပြီးသုံးမျိုုးသုံးစားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
Default ကတော့ HP recommended ပါ အခုလည်း အဲဒီ mood မှာပဲထားထားပါတယ်ခင်ဗျာ.......
hololodilolo wrote: »
အဲဒါ battery အမျိုးအစားနဲ့ဆိုင်တယ်လေ အမရဲ့
Nickel Cadmium вЂ“ NiCd batteries were actually the first rechargeable laptop batteries ever. Manufactures loved them because their cost was relatively low and they hadahigh output. You wonвЂ™t find Nickel Cadmium batteries being used anymore, due to them being heavier and not as efficient as the newer laptop batteries.
Nickel Metal Hydride вЂ“ NiMH batteries can still be found all over the place -- particularly for older model laptops. The rechargeable NiMH laptop battery wasabig step up for notebook technology mostly in part because they were more reliable than the NiCd batteries, and they had an even higher output. The NiMH battery was also cheaper to produce, and safer to use.
The only issue with NiMH batteries is that they can haveamemory effect. Basically, if you donвЂ™t fully discharge the battery, it can remember this and leave you withaless than perfect battery output.
Lithium Ion вЂ“ LiON batteries are now used in most new laptops. Unlike the NiMH battery, LiON laptop batteries have no memory effect. LiON batteries are also lighter than both NiCd and NiMH notebook batteries. Both of these advantages equal out to the Lithium Ion battery being the most popular and most expensive among the various notebook power sources.
ဟုတ်ကဲ့ မီးလာတိုင်း အမြဲ ပလပ်တပ်ထားပြီး သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုသုံးရင်တောင် တပတ်တခါတော့ အားကုန်အောင် သုံးပေးရတယ်ဆို။ ဘယ်လိုက ပိုကောင်းလဲ။
ကျွန်တော်သိသလောက် ပလပ်တပ်ထားပြီး သုံးရင် battery ကိုဖြုတ်ထားသင့်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်
မဟုတ်ရင် battery power ကျတတ်တယ်
laptop တွေကို မီးပျက်တဲ့အခါ USB fan ကိုမဖြုတ်ဘဲ ဆက်တပ်ထားရင် အဲ့ fan ကြောင့်လဲဖြစ်တတ် တယ်လို့ ကြားဘူးပါတယ်။ အပူသက်သာစေချင် လို့ဆိုပေမဲ့ ဘယ်ထီက ကြာရင် ပျက်တတ်တယ်ပြောတာပဲ ကျတော့် အစုတ်လေးလဲ အဲ့ဒီကေ့စ် နဲ့ဆိုင်ရောက်နေ ပါတယ် USB fan သုံးတဲ့ သူများအတွက် သိစေချင်လို့ပါဗျာ ..... မဟုတ်ရင် သူများပြောတာလို့ မှတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကျတော်ပြောတာပါ ဟီး
အလကားစတာပါ ဘယ်ထီ ပျက်မပျက်က မသေချာဘူးဆိုရင်တောင် fan ကြောင့်အားမြန်မြန်ကုန်မှာတော့သေချာပါတယ်.... ငယ်ငယ်က အန်တီဆင့်ကြီးပြော သလိုပြန် ပြောရရင် တီလုံးကမီးထွမ်းဖို့ တီလုံးက ကဲ့ဆဲ့ဖွင့်ဖို့ ဆိုပြီး ထားရမလိုတောင်ဖြစ်နေပြီး:))
အကောင်းဆုံးကတော့ battary နဲ့ဆိုရင် USB fan ကိုဖြုတ်ထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ .... Chargen ရဲ့သဘောက ... အား..အရမ်းကြီးဆိုဆိုး၀ါး၀ါးကုန်သွား ရင်..ဘထ္ထရီကို အရမ်းထိခိုက်စေတယ်လို့... ကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့.. Labtop Company တစ်ခုက အကြံပေးပါတယ် ... .ဘထ္ထရီ သက်တမ်း ကို တိုစေတယ်ပေ့ါဗျာ..အဲဒီတော့ .. ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ ... ဘထ္ထရီကို ပြည့်အောင်ဖြည့်ထားတယ် မီးပျက်ရင်တော့ ... .ဘထ္ထရီနဲ့ဘဲသုံးရတော့တာပေါ့...ဒါပေမဲ့..35% တော့အမြဲချန်ထားပြီးသုံးတယ်ဗျ... ပြီးတော့ ... Screen ရဲ့ Brightness ကိုလည်း ... ရနိုင်သလောက်လေးလျှော့ထားတယ် ... ပြီးတော့ ... အိမ်မီးစက်နဲ့..သိပ်မသုံးဘူး... EPC မီးနဲ့မှသုံးတယ်... Voltage Spike ဖြစ်တတ်လွန်းလို့ပါ ... အဲဒီလို... .ဘထ္ထရီအားကို ...3ပုံတစ်ပုံ..လောက်ချန်ပြီး...သုံးရင်တော့ ... .ဘထ္ထရီ က သက်တမ်း အပြည့် နီးပါ...ပါ၀ါကို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့... အွန်လိုင်တွေမှာတော့ ... မကြာမကြာဖတ်ဖူး ပါတယ် ... . .ဘထ္ထရီ က အရမ်းကြီး အားကုန်သွားလို့ရှိရင် ... ပြန်ပြီး Recharge လုပ်တဲ့အချိန်က ပိုကြာပြီး... သူရဲ့အထဲက.. Cell တွေကို လိုက်ပြီး စစ်ဆေး နေပြီးမှ.. အားပြန်သွင်းတတ်တယ် ... ဟိုလိုမျိုး .. .ဘထ္ထရီ ကို အကုန် သုံးလိုက်တော့... အဲဒီ.ဘထ္ထရီ ထဲမှာ ပါတဲ့ ... Cell တွေဟာ .. သူတို့ရဲ့.. ခုခံနိုင်မှုစွမ်းအားကို အစွမ်းကို ထုတ်သုံးလိုက်တဲ့အတွက် ... Resistance Power ကို ကျသွားစေပြီး... အဲဒီလိုမျိုး ... အများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင် ... .ဘထ္ထရီက မကြာခင် သွားတော့တာဘဲတဲ့ခင်ဗျ... တစ်ချို့ .. .ဘထ္ထရီ တွေကျတော့ ... အလွာ..(5/6/7..etc) စသည်ဖြင့် ရှိတတ်ကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ... အဲဒီ.. အလွာအမျာကြီးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာတွေကျတော့... ပိုခံတာပေါ့ဗျာ... ပြီးတော့... အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင် ... စျေးကလည်း ... စကားပြောသေးတယ်ခင်ဗျ... ဘထ္ထရီ သက်တမ်းကဘယ်လောက်လဲ ဆိုတော့ ... အတိအကျကြီးပြောဖို့ အရမ်းခက် တယ် ... တစ်ချို့.. Branded တွေကျတော့ ... သူတို့ရဲ့... စည်းကမ်းချက်နဲ့ညီရင် ... .ဘထ္ထရီ ရဲ့ အား သက်တမ်းက 3/3:30 နာရီ .. လောက်ကတော့ 3/5 နှစ်လောက်ကတော့ ... အသာလေးသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပါတယ်... ဒါကလည်း ... အမျိုးအစားအလိုက် ... ကွာဦးမှာပါ... တစ်ချို့ကျတော့လည်း .. 4/4:30 ခံတယ်လို့လည်း ပြောကြတယ် ... အခုနက ... ပြောတဲ့ .... Brightness တို့..ဘာတို့..လျှော့ထားရင်ပေါ့.. တစ်ချို့ဆို USB external တွေပါ ပါတတ်တော့ ... မလိုအပ်ဘဲဖြုတ်ထားရင်...ပိုခံတာပေါ့...ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်သိသလောက် ကတော့... ဒီလောက်လေးပါဘဲ..
laptop battery ကိုအရမ်းအေးတဲ့နေရာမှာထားရင် power ကျတတ်ပါတယ်
အဆိုးဆုံးက aircon အောက်တည့်တည့်မှာထားသုံးတာပဲ (မသုံးလဲ မထားသင့်ပါဘူး):68:
မနောက်ပါနဲ့ korea မှာ -၁၈ ဗျ အေးတာမှ၃လ:68:
ကျွန်တော်လည်းကိုပြုံးလိုပါပဲခင်ဗျာ default ပဲသုံးတယ်
ကျွန်တော့် ဟာက acer ဆိုတော့ hp recommended မဟုတ်ပါဘူး balance ပါဗျာ
Battery ကို တစ်လတစ်ခါ လုံးဝအားကုန်သွားတဲ့အထိတော့ သုံးပေးရတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်....
ကျနော့်အသိတစ်ယောက်ကတော့ Battery ကို ပလပ်နဲ့သုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင် ဖြုတ်ထားလိုက်တာပါပဲ...
ဘက်ထရီက အေးလို့ အကုန်မြန်တယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ တခြားဟာတွေနဲ့ကော စမ်းပြီးပြီလား? တိုက်ဆိုင်သွားတာထင်ပါတယ်။
Ko Ko Win wrote:
aircon အောက်တည့်တည့်မှာထားရင် ပိုကုန်တာမြန်ပါတယ်
(lenovo, hp, acer, benq, toshiba )
အားလုံးက sony battery ပါ
(hp ကလွဲလို ့ပေါ့)
:Oအဲရာကွန်: ရေခဲသစ်တာ heater တို့နဲ့နီးနီးမှာဆိုရင် monitor ,TV , speaker ,battery etc..။ပျက်စီးလွယ်တယ်လို့မှတ်သားဖူးပါတယ်:67: